#फेसबुक | Suvadin !
काठमाडौं । विश्वभर सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले भिडियो कलसम्बन्धी नयाँ सेवा सुरु गर्न लागेको छ। अहिले भइरहेको भिडियो कलसम्बन्धी सेवाभन्दा केही थप र फरक विषेशतासहितको सेवा सुरु गर्न लागिएको फेसबुकले जानकारी दिएको छ। ‘म्यासेन्जर रुम’ नाम दिइएको नयाँ सेवामा एकैपटकमा ५० भन्दा बढीले कु...
सान फ्रान्सिस्को । संयुक्तराज्य अमेरिकाको निकै लोकप्रिय अनलाइन भुक्तानी कम्पनी पेपल होल्डिङ्सले फेसबुकको अग्रसरतामा गठन भएको लिब्रा एसोसिएसनबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ । फेसबुकको अग्रसरतामा रहेको डिजिटल मुद्रा परियोजनाका २८ वटा सदस्यमध्ये पेपल एक थियो । पेपलले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन ग...
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले दशौँ हजार एप्सलाई निलम्बन गरिदिएको छ । सन् २०१८ मार्चको केम्ब्रिजको विश्लेषणात्मक तथ्याङ्कका कारण फेसबुकले अध्ययनका लागि ती एप्सलाई निलम्बन गरेको कम्पनीले शुक्रबार जनाएको छ । निलम्बनमा परेका एप्समध्ये झण्डै चार सय ओटा निर्माता छन् । आफ्ना प्रयोगकर्तासँग सम्बन्...
गलत सूचना प्रवाह गर्ने फेसबुक र ट्विटर एकाउन्ट डिलिट गरिने
एजेन्सी । हङकङमा चलिरहेको राजनीतिक संकट र प्रजातन्त्रको पक्षमा भइरहेको प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्नका लागि चीन सरकारको सहयोगमा भइरहेका गलत सूचना प्रवाह गर्ने अभियानविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर र फेसबुकले काम गर्न थालेका छन् । गलत सूचना प्रवाह गर्ने एकाउन्टहरु ट्वीटर र फेसबुकले डिलिट गर्ने अभियान...
DilipKarki 219 0
DilipKarki 335 0
फेसबुकले ल्याउने डिजिटल मुद्रा 'लिब्रा'ले कसरी प्रयोग गर्ने ?
काठमाडौं । फेसबुकले अर्को वर्ष लिब्रा नाम दिइएको एउटा नयाँ डिजिटल मुद्रा सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सोसल मिडिया कम्पनीका अनुसार त्यस्तो मुद्रामार्फत् मानिसहरूले उसको आफ्नै एप्स तथा ह्वाट्सएपबाट आर्थिक कारोबार गर्न सक्नेछन्। भविष्यमा उबर र भिसाजस्ता कम्पनीले समेत त्यसलाई स्विकार गर्...
DilipKarki 306 0